Zenkit: टोलीहरू, उपकरणहरू र कम्पनिहरूमा कार्यहरू प्रबन्ध गर्नुहोस् Martech Zone
सोमबार, मार्च 16, 2020 बिहीबार, अप्रिल 1, 2021 Douglas Karr
जबसम्म वन्डरलिस्टको शटडाउन आधिकारिक बनाइएको थियो, धेरै प्रयोगकर्ताहरू तुरुन्तै एक विकल्पको खोजीमा छन्। हालका विकल्पहरूमा हजारौंले आफ्नो निराशा व्यक्त गरिसकेका छन, त्यसैले जेनकिटले विकास गर्ने निर्णय गरे Zenkit गर्न ताकि Wunderlist प्रयोगकर्ताहरू ठीक घर मा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुनै संयोग होइन उनीहरूको अनुप्रयोगका सुविधाहरू र सहज अन्तर्वार्ता Wunderlist जस्तै यस्तै हो।
आजका अनुप्रयोगहरू या त सरल सूचीहरू छन् (जस्तै Wunderlist, Todoistवा एमएस गर्न) वा बहु दृश्यहरूको साथ जटिल परियोजना व्यवस्थापन उपकरणहरू (जस्तै Wrike or जिरा)। यथार्थ यो हो कि, बिभिन्न प्रकारका कामदारहरूलाई बिभिन्न प्रकारका उपकरणहरू चाहिन्छ। एक एकल अनुप्रयोगले यो कसरी गर्न सक्दछ?
Zenkit ले Zenkit To do, उनीहरूको नयाँ टास्क म्यानेजमेन्ट अनुप्रयोग सुरू गर्दैछ, Wunderlist अघि May मे, २०२० मा बन्द गरिएको थियो।
Zenkit गर्न डो Zenkit संग एकीकृत:
Zenkit (सुपर सरल) गर्न-अनुप्रयोग पूर्ण रूपमा Zenkit प्लेटफर्म संग एकीकृत छ। अब देखि, तपाईं गर्न को काम मा आफ्नो कार्यहरूमा काम गर्न वा कन्नब र गैन्ट चार्ट जस्तै परिष्कृत दृश्यहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै सिncing्क छैन, आयात छैन, कुनै समस्या छैन! सबै अनुप्रयोगहरूले एक डाटा स्टोर साझा गर्छन्। यसले विभिन्न स्तरका व्यक्तिहरूलाई सँगै, प्रोजेक्ट सिंहावलोकनको साथ प्रबन्धकहरूलाई उनीहरूको कार्यशील कार्यहरूको साथ टीमका सदस्यहरूमा ल्याउन सक्छ।
Zenkit र Zenkit Plus का सुविधाहरू:
गतिविधि ट्र्याकिंग गतिविधिहरू हेर्नुहोस् जब उनीहरू देखा पर्दछन्। तपाईंको टोली, सlections्ग्रह, र व्यक्तिगत आईटमहरूमा भइरहेको सबै चीज हेर्नुहोस्।
उन्नत प्रशासन - SAML- आधारित SSO प्रयोग गर्नुहोस्, प्रावधानको साथ प्रयोगकर्ताहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्, र संगठनहरूको साथ प्रयोगकर्ता गतिविधिहरू अनुगमन र अडिट गर्नुहोस्।
एकत्रीकरण तपाईंको डाटाको द्रुत सिंहावलोकनको लागि कुनै पनि दृश्यमा कुनै पनि फिल्डका लागि समुहहरू हेर्नुहोस्।
कार्यहरू तोक्नुहोस् - सजिलै आफ्नो टोली सदस्यलाई काम दिएर कार्य सुम्पनुहोस्। उनीहरूलाई सूचित गर्नुहोस् जतिखेर नयाँ कार्यमा तिनीहरूको ध्यान आवश्यक पर्दछ।
थोक कार्यहरू - थप्नुहोस्, हटाउनुहोस्, वा बहु आईटममा कुनै फिल्डको मान बदल्नुहोस्। कहिल्यै थकाउने डेटा प्रविष्टि गर्न कहिल्यै अड्किएन!
पात्रो सिnc्क - कहिल्यै अर्को भेट छैन! Zenkit को गुगल क्यालेन्डर एकीकरणको मतलब यो हो कि तपाईंको पात्रोहरू सँधै सि .्कमा हुन्छ।
जाँचसूचीहरू - सबटाकहरू ट्र्याक गर्न द्रुत तरिका चाहिन्छ? एक चेकलिस्ट प्रयोग गर्नुहोस्! प्रगति दृश्यात्मक ट्र्याक गर्नुहोस् र चीजहरू पूरा भए पछि मार्क गर्नुहोस्।
सहयोग गर्नुहोस् - सहकर्मीहरू, परिवार र साथीहरूलाई आमन्त्रित गर्नुहोस् तपाईंको प्रोजेक्टमा तपाईंलाई सहयोग गर्न।
रंगीन वस्तुहरू - तपाईका वस्तुहरूलाई रंगमा ठुलो पार्नुहोस्। बोल्ड, चम्किलो रंगका साथ कार्यहरू बीच सजीलो भिन्नता गर्नुहोस्
टिप्पणी - टिप्पणीहरूमा तपाईंको टोलीसँग सहकार्य गर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईंको काम र कुराकानी जडित रहनेछ। गल्ती गर्नुभयो? टिप्पणीहरू सम्पादन गर्नुहोस् ताकि सबैसँग सही जानकारी हुन्छ।
अनुकूलन पृष्ठभूमि - तपाइँ र तपाइँको टीम को लागी Zenkit अनुकूलित। Zenkit Plus मा अपग्रेडको साथ तपाईंको आफ्नै पृष्ठभूमि र छविहरू थप्नुहोस्।
डेस्कटप अनुप्रयोगहरू - म्याकोस, विन्डोज र लिनक्सको लागि एक सुन्दर, विकर्षण रहित अनुप्रयोग। कार्यहरू छिटो थप्नुहोस्, बहु स्क्रीनहरू खोल्नुहोस्, र उत्पादक अफलाइन रहनुहोस्।
तानेर खसाल्नु - सहजै आफ्ना प्रोजेक्टहरू व्यवस्थित गर्नुहोस् र वस्तुहरू सार्नुहोस् जुन तपाईं ड्र्याग र ड्रपको साथ प्रगति गर्दै हुनुहुन्छ।
संग्रहमा ईमेल गर्नुहोस् - सीधै Zenkit लाई कार्य ईमेल गर्नुहोस् र कार्यहरूलाई एउटा अनौंठो ईमेल ठेगाना मार्फत नियुक्ति गर्नुहोस्। तपाईंको इनबक्सबाट नयाँ आईटमहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
मनपर्ने - एकै ठाउँमा तपाईको खाताबाट आईटमहरू ट्र्याक गर्न मार्ग चाहिन्छ? तिनीहरूलाई मनपर्नेको रूपमा चिन्ह लगाउनुहोस् ताकि तपाईं तिनीहरूलाई स्न्यापमा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ।
फाइल साझेदारी - सँगै काम। तपाईंको डेस्कटप, वा तपाईंको मनपर्ने क्लाउड भण्डारण सेवाहरूबाट कागजातहरू र छविहरू साझा गर्नुहोस्।
फिल्टर - जेनेकिटको शक्तिशाली फिल्टरहरू प्रयोग गरेर खोज्दै हुनुहुन्छ ठ्याक्कै तल ड्रिल गर्नुहोस्। कस्टम दृश्य सिर्जना गर्न बारम्बार प्रयोग गरिएको फिल्टरहरू बचत गर्नुहोस्।
सूत्रहरू कुनै पनि स field्ग्रहबाट डेटा जडान गर्न, संयोजन गर्न र कुनै संग्रहबाट डाटाको विश्लेषणको लागि सूत्रहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
Gantt Chart - एक स्पष्ट समयरेखामा लैग र सीसा, माइलस्टोनहरू, महत्वपूर्ण पथ, र अधिकको साथ जटिल प्रोजेक्टहरूको समय तालिका र ट्र्याक गर्नुहोस्!
ग्लोबल क्यालेन्डर - धेरै परियोजनाहरु जगलिंग? कार्यहरू र घटनाहरू सबै संग्रहमा ट्र्याक गर्न एक मार्ग आवश्यक छ? कहिलेकाँही तपाईले सबै चीज एक ठाउँमा देख्नु पर्छ। "मेरो क्यालेन्डर" प्रविष्ट गर्नुहोस्।
ग्लोबल खोजी - चाँडै कुनै वस्तुमा पुग्न आवश्यक छ? अभिलेख राखिएका आईटमहरू खोज्न चाहानुहुन्छ? विश्वव्यापी खोजीले सेकेन्डमा केहि पनि फेला पार्न सक्दछ।
लेबलहरू - Zenkit लेबल फाँटहरू आइटम को वर्गीकृत गर्न, प्राथमिकता तोक्न, प्रगति ट्र्याक गर्न, र अधिक, धेरै लचिलो छ। तपाइँले सिर्जना गर्नुभएको कुनै पनि लेबल फिल्डद्वारा तपाइँको कन्बन बोर्डहरू व्यवस्थित गर्नुहोस्।
उल्लेख - महत्त्वपूर्ण टीमको बारेमा अन्य टोली सदस्यहरूलाई तुरुन्त सूचित गर्न आवश्यक छ? तपाईंको सहकर्मीहरूलाई पिंग गर्नका लागि @mentions प्रयोग गर्नुहोस् र सम्बन्धित टीमका सदस्यहरूलाई कुराकानीमा ल्याउनुहोस्।
मोबाइल अनुप्रयोग - जाने मा Zenkit प्रयोग गर्नुहोस्! कुनै जडान छैन? समस्या छैन। IOS को लागि Zenkit र एन्ड्रोइड अफलाइन काम समर्थन गर्दछ र सिंक हुनेछ जब तपाईं पुन: जडान भयो।
सूचनाहरू - सूचनाहरू तपाईंलाई विचलित गर्नुको सट्टा मद्दत गर्नुहोस्। तपाईको सूचनाहरू तपाईलाई चाहिएको जानकारी पाउनका लागि अनुकूलन गर्नुहोस्, कहिले र कहाँ तपाईलाई चाहिन्छ।
पुनरावर्ती वस्तुहरू - के कार्यहरू छन् जुन तपाईं प्रत्येक हप्ता वा महिना दोहोर्याउनुहुन्छ? एक आवर्ती कार्य सेट अप गर्नुहोस् ताकि तपाईले कहिल्यै भेट्ने समय गुमाउनुहुन्न।
सन्दर्भ - गर्न को लागी एक पूर्ण अनुकूलन सम्बन्ध डाटाबेस सिर्जना गर्न को लागी गर्न को लागी एक गर्न को उपयोग गर्नुहोस्। केवल एक लिंक भन्दा बढी शक्तिशाली, सन्दर्भहरूले तपाईंको डाटा समक्रमणमा राख्छ।
रिच टेक्स्ट सम्पादन - Zenkit को साधारण रिच टेक्स्ट एडिटर ले तपाईंलाई तपाईंको काम विस्तार गर्न सुन्दर पाठ सिर्जना गर्न दिन्छ। HTML, मार्कडाउन, वा आधारभूत पाठ प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको शब्दहरूलाई ठुलो बनाउनका लागि।
सर्टकटहरू - द्रुत आईटमहरू थप्नुहोस्, दिमाग मानचित्र शाखाहरू सार्नुहोस्, लेबलहरू थप्नुहोस्, र अधिक जेनकिट सर्टकटको साथ अधिक।
सबटास्क - कुनै पनि वस्तुमा तोकिएको मितिहरू, तोकिएको प्रयोगकर्ताहरू, र अधिकका साथ सबटास्कहरू थप्नुहोस्।
दृश्य स्विच गर्नुहोस् - सूची र प in्क्तिहरूमा कुनै लेबल द्वारा तपाईंको कन्बन बोर्ड समुहबद्ध गर्नुहोस्। प्राथमिकता मैट्रिक्स सिर्जना गर्नुहोस् वा सदस्यद्वारा प्रगति ट्र्याक गर्नुहोस्।
टीम कार्य - तपाईको टीमको लागि ईनबक्स। तपाईलाई राख्नु भएको वा सबैलाई सहयोग गरेको सबै आईटमहरू हेर्न एक ठाउँ। जटिल प्रोजेक्टहरूमा हराएको बिना नै तपाईंको टीमलाई स्वचालित रूपमा आइटमहरू सिर्जना गर्नुहोस् र असाइन गर्नुहोस्।
टीम विकी - क्षणहरूमा सुन्दर, सामग्री-धनी विकी सिर्जना र प्रकाशित गर्नुहोस्। विकी सदस्यहरूसँग वास्तविक समयमा सहकार्य गर्नुहोस्।
टेम्प्लेट - कहाँ सुरु गर्ने भनेर निश्चित हुनुहुन्न? एक विशेषज्ञको पुस्तक बाहिर एक पात लिनुहोस् र हाम्रो एक व्यापार तयार टेम्पलेटहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।
कार्यतालिका - कुनै प्रोजेक्टलाई डू-डू सूचीमा बदल्नुहोस् र तपाईंको कार्यहरू मार्फत उडान गर्नुहोस्! कार्यहरू गरिसकेका रूपमा चिन्ह लगाउनुहोस् र तिनीहरूलाई सूची तल सार्न हेर्नुहोस्।
दुई-फ्याक्टर प्रमाणीकरण - निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको खाता दुई कारक प्रमाणीकरणको साथ सुरक्षित छ। सबै Zenkit प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध।
प्रयोगकर्ता भूमिकाहरू - तपाईंको कार्यको सुरक्षा बढाउन र तपाईंको टीमको उत्पादकता बढाउनका लागि प्रयोगकर्ताहरूलाई भूमिका दिनुहोस्।
अफलाइन काम गर्नुहोस् - जाने मा Zenkit प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईंसँग इन्टरनेट जडान छ वा छैन! अफलाइन मोड वेब संस्करणमा पनि समर्थित छ
Zapier - en750० भन्दा बढि मनपर्ने अनुप्रयोगहरू र सेवाहरू Zenkit को Zapier एकीकरणको साथ एकीकृत गर्नुहोस्। Zapbook
टैग: Jiraकार्य व्यवस्थापनगर्न-केकार्यतालिकाtodoistwunderlistzenkit
मई 6, 2012 मा 6: 06 PM
धन्यवाद डग्लस, मँ तपाईको पोष्टको अगाडि वन्डरलिस्टमा आएको छैन। मैले अझ बढी पत्ता लगाउनु पर्छ! के तपाईं फोन अनुप्रयोगमा एक फलो अप पोष्ट गर्दै हुनुहुन्छ? अधिक जान्न मनपर्छ!